2020-04-02 @ 22:29 in Ankapobeny
Nosoratana tao amin'ny Facebook, tamin'ny voalohany avrily efa alina...
Filoha be fihetsiketsehana, Efa fahita iny.
Fa tsy maintsy misy vahaolana politika ity na tianao na tsy tianao.
Efa hifarana ny fotoana fihibohana tapabolana ary efa miandry ny tohiny ny olona, hotohizana ve sa tsia ilay fihibohana?
Na hitohy io fihibohana io na tsia, izay fanapahan-kevitra horaisin'ny Filoha dia hanakianana azy avokoa, ary hiandrasana azy an-kodimirana araka ny fiteny mahazatra.
Ka inona ny vahaolana amin'izany? Ahoana ny hampihenana ny fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo sosialy sy politika eto Madagasikara?
Zavatra iray, iangaviana mba tsy hitetateta hihevitra fa hahavita irery amin'ny ady amin'io Covid-19 io, heverina ho dokambarotra politika hatrany izay fihetsika rehetra fakana fon'ny olona, heverina ho fanararaotana ny zavamisy eto Madagasikara.
Ny fihetsika mahomby indrindra sy mety hampiara-mientana ny vahoaka iray manontolo dia ny fakana ireo filoha teo aloha rehetra, fakana hevitra azy rehetra ireo, ary miara-miseho amin-dry zareo imasom-bahoaka. Fanetre-tena avy amin'ny filoha ihany no ahafahana mahavita izany ary mety ahafahana misoroka amin'ny rotaka ahiana hitranga amin'ny vokatry ny fanapahan-kevitra rehetra na hanohy na hanatsahatra ny fihibohana. Tenim-pitiavana tsy hisian'ny korontana eto Madagasikara io zavatra soratako io. Faly aho raha raisina io tolo-kevitra io fa tsy manenina amin'izay soratako kosa aho raha tsy raisina ilay tolo-kevitro.